အမြင့်ဆုံး ဆုတွေ ထဲက တစ်ဆု ဖြစ်တဲ့ Creu de Sant Jordi ဆုကို ကတ်တလန် အစိုးရက ကိုယ်တိုင် မက်ဆီ ကို ချီးမြှင့် – Zeekwat Hot News
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ၊ မက်ဆီဟာ ကတ်တလန် အစိုးရကနေ ချီးမြှင့်တဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆုတွေ ထဲက တစ်ဆု ဖြစ်တဲ့ Creu de Sant Jordi ဆုကို မနေ့ညက လက်ခံ ရယူသွားခဲ့ ပါတယ်။ဒီဆုကို သမ္မတ ကွင်တော်ရာ ကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကတ်တ လန် ဒေသရဲ့ ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ သူတွေ နဲ့ ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ လူမှု ထူးချွှန်ရေး လုပ် ငန်းမှာ ပြောင်မြောက်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့
တဲ့ သူတွေကို ပေးအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာ ဒီဆုပေးပွဲကို ကလပ် ဥက္ကဌကြီး ဘာတိုမြူရဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၊ ဒုတိ ယ ဥက္ကဌ ကာဒိုနာ ၊ မက်စ်ထရီ ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ အလီယက် ၊ ဒီဒက်လီ ၊ ရော့ဆော့ ၊ ဂျိုးဆက် ပုံ့ ၊ အလုပ်အမှုဆောင်ချုပ် အော် စကာ ဂါရူ ၊ မန်နေဂျာ ဆီဂူရာ ၊ အားကစား ဒါရိုတ်တာ အဘီဒယ် တို့လဲ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မက်ဆီ ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား
ဘ၀ တစ်လျှောက် အောင်မြင် မှုပေါင်း များစွာနဲ့ ဖြတ်သန်း နိုင်ခဲ့လို့ ၊ ဒီဆုကို နှင်းအပ်ခံရမယ့် အကြောင်းကို ဧပြီလ 30 ရက်နေ့ ကတည်း က အသိပေး ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ၊ အသင်းရဲ့ အကယ်ဒမီမှာ အ ဆင့်ဆင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကာ ၊ ဘောလုံး သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ကစားသမား တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ရေ
လာက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေ ရှာဖွေ နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သူရဲ့ လူသားဆန်မှု ၊ ရိုးသားမှု ၊ တီ ထွင်ဖန်တီး နိုင်မှု ၊ အသင်းလိုက် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားမှု နဲ့ လေးစားမှု အပြည့် ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ကြောင့်လဲ ပိုပြီး တော့ ဂုဏ်ပြောင်ခဲ့ ရသလို ၊ သူ တည်ထောင် ထားခဲ့တဲ့ မက်ဆီ ဖောင်ဒေးရှင်း ကနေလဲ ကလေးငယ်တွေ အတွက် ကျန်းမားရေး ၊ ပညာရေး တွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့မှုကြောင့် အခုလို ကတ်တလန် အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ် ပြုခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမွငျ့ဆုံး ဆုတှေ ထဲက တဈဆု ဖွဈတဲ့ Creu de Sant Jordi ဆုကို ကတျတလနျ အစိုးရက ကိုယျတိုငျ မကျဆီ ကို ခြီးမွှငျ့
ဘာစီလိုနာ အသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ ၊ မကျဆီဟာ ကတျတလနျ အစိုးရကနေ ခြီးမွှငျ့တဲ့ အမွငျ့ဆုံး ဆုတှေ ထဲက တဈဆု ဖွဈတဲ့ Creu de Sant Jordi ဆုကို မနညေ့က လကျခံ ရယူသှားခဲ့ ပါတယျ။ဒီဆုကို သမ်မတ ကှငျတျောရာ ကိုယျတိုငျ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ၊ ကတျတလနျ ဒသေရဲ့ ပုံရိပျကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ သူတှေ နဲ့ ၊ အရပျဘကျဆိုငျရာ လူမှု ထူးခြှနျရေး လုပျ ငနျးမှာ ပွောငျမွောကျစှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ သူတှကေို ပေးအပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။မကျဆီဟာ ဒီဆုပေးပှဲကို ကလပျ ဥက်ကဌကွီး ဘာတိုမွူရဲ့ ဦးဆောငျမှု နဲ့ ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး ၊ ဒုတိယ ဥက်ကဌ ကာဒိုနာ ၊ မကျဈထရီ ၊ ဘုတျအဖှဲ့ဝငျတှေ ဖွဈတဲ့ အလီယကျ ၊ ဒီဒကျလီ ၊ ရော့ဆော့ ၊ ဂြိုးဆကျ ပုံ့ ၊ အလုပျအမှုဆောငျခြုပျ အျောစကာ ဂါရူ ၊ မနျနဂြော ဆီဂူရာ ၊ အားကစား ဒါရိုတျတာ အဘီဒယျ တို့လဲ ပါဝငျ တကျရောကျခဲ့ကွပါတယျ။မကျဆီ ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ တဈလြှောကျ အောငျမွငျ မှုပေါငျး မြားစှာနဲ့ ဖွတျသနျး နိုငျခဲ့လို့ ၊ ဒီဆုကို နှငျးအပျခံရမယျ့ အကွောငျးကို ဧပွီလ 30 ရကျနေ့ ကတညျးက အသိပေး ခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ငယျငယျရှယျရှယျ နဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ရောကျရှိ လာခဲ့သူ ဖွဈပွီး ၊ အသငျးရဲ့ အကယျဒမီမှာ အဆငျ့ဆငျ့ ကြျောဖွတျခဲ့ကာ ၊ ဘောလုံး သမိုငျးကွောငျး တဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး ကစားသမား တဈယောကျ အဖွဈ သတျမှတျခံရလောကျအောငျ အောငျမွငျမှုတှေ ရှာဖှေ နိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ သူရဲ့ လူသားဆနျမှု ၊ ရိုးသားမှု ၊ တီ ထှငျဖနျတီး နိုငျမှု ၊ အသငျးလိုကျ စှမျးဆောငျရညျ မွငျ့မားမှု နဲ့ လေးစားမှု အပွညျ့ ထားတဲ့ စိတျဓါတျတှေ ကွောငျ့လဲ ပိုပွီး တော့ ဂုဏျပွောငျခဲ့ ရသလို ၊ သူ တညျထောငျထားခဲ့တဲ့ မကျဆီ ဖောငျဒေးရှငျး ကနလေဲ ကလေးငယျတှေ အတှကျ ကနျြးမားရေး ၊ ပညာရေး တှမှော စှမျးစှမျးတမံ လုပျဆောငျပေးခဲ့မှုကွောငျ့ အခုလို ကတျတလနျ အစိုးရ ကိုယျတိုငျက အသိအမှတျ ပွုခံလိုကျရတာ ဖွဈပါတယျ။
Hey Buddy!, I found this information for you: "အမြင့်ဆုံး ဆုတွေ ထဲက တစ်ဆု ဖြစ်တဲ့ Creu de Sant Jordi ဆုကို ကတ်တလန် အစိုးရက ကိုယ်တိုင် မက်ဆီ ကို ချီးမြှင့်". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/920. Thank you.